Waa Imisa Tirada Ciidanka Suudaan Ka Jooga Dalka Yeman? (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
Waa Imisa Tirada Ciidanka Suudaan Ka Jooga Dalka Yeman? (Warbixin)
December 10, 2019 9:28 am by admin Views: 60
Raiisel wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduuk ayaa todobaadkan shaaciyey in tirada askarta ka dagaallamaya Yemen ee ka tirsan isbahaysiga carabta ay hoos uga dhacday 15,000 ilaa 5,000.
Kudhawaaqista hadalkiisan ayaa timid ka dib booqasho 6 maalmood qaadatay oo uu ku joogay Mareykanka, xilligaas oo uu doonayey aqbalaada Mareykan oo ah in magaca Suudaan laga saaro liiska waddamada maalgeliya (waxa loogu yeero) “argagixisada”. Laakiin isagu ma uusan ballan qaadin go’aanka aqbalaadda, wuxuuse soo laabtay isagoo rajo ka qaba in Washington ay bedeli doonto mowqifkeeda ku aaddan Suudaan.
“Tirada askarta Suudaan ee ku sugan Yemen waxay markii hore ahayd 15,000, haddana waxaa laga dhigay shan kun,” ayuu Xamduuk Ku Sheegay Bayaankiisa.
Wuxuu intaas ku daray, “Waxaan aaminsanahay in xalka Yemen uu yahay mid siyaasadeed isla markaana Suudaan ay diyaar u tahay inay ka caawiso reer Yaman sidii ay u gaari lahaayeen Horumar.”
Waa in la ogaadaa in Suudaan xilligii Madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar al-Bishr sanadkii 2015 ay u dirtay ciidamo si ay ugu dagaallamaan isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga iyaga oo ku beddelanaya mushaaro iyo deeqdo aad u soo jiidasho leh.
Inta badan ciidamadan waxay ka tirsan yihiin xoogaga uu hogaaminayo Muxamad Xamdaan, oo loo yaqaanp, “Hamidata”.
Hamidati waxaa lagu soo oogay dacwado dhawr ah, oo ay ka mid yihiin boobka dahabka ee Suudaan iyo tahriibkiisii Imaaraatka, kaas oo uu ku amaanayo waxqabadka Sacuudiga.
Waa in la ogaadaa in bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, Hamidati uu ku dhawaaqay ka bixitaanka 10,000 oo ah shaqaalaha ISF isaga oo aan ku beddelin kuwa kale.
Yeman waxaa isku bahaystay dowlado uu Mareykanku kor ka taageerayo iyo ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah, oo todobaad walba gumaad u geustay hooyooyinka iyo caruurta muslimiinta ah ee wadanka Yeman.